Avaradrano – Talata-Volonondry : hampianatra kabary maimaim-poana ny Mpiava - ewa.mg
Avaradrano – Talata-Volonondry : hampianatra kabary maimaim-poana ny Mpiava
News - Avaradrano – Talata-Volonondry : hampianatra kabary maimaim-poana ny Mpiava
Ho fanandratana ny
kolontsaina malagasy amin’ny alalan’ny famolavolana ny olona eny
anivon’ny kaominina sy faritra Avaradrano ny antom-pisian’ny
Mpiava, izay rantsana iray eo anivon’ny
“Izay tia ny tenin-drazany, tia ny
tanindrazana”… Mitohy ny fampianarana kabary maimaim-poana, izay
tanterahin’ny Fi.mpi.ma( Fikambanan’ny mpikabary malagasy) sampana
Mpiava ( mpikabary Iarivo Avaradrano) ho an’Antananarivo
Avaradrano. Tsy ho diso anjara amin’izany ny kaominina
Talata-Volonondry, rahampitso, asabotsy 16 janoary 2021
manomboka amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro. Izany dia
hotanterahina ao amin’ny EPP Talata-Volonondry, tafiditra ao
amin’ny andia “Aviavy”. Izany no tanteraka dia vokatry ny
fiaraha-miasa amin’ny ben’ny Tanàna, i Hobiherisaona
Randrianirina, ary ny kaominina Talata-volonondry, “Mba ho Tanana
miara-mandray ary fo miara-mitepo ho fampitana ny soatoavina
malagasy, indrindra mba ho fitaizana ireo vahoaka zanaky ny tanàna
sy hoenti-mampandroso ny faritra”, araka ny nambaran’i Arison
Olivier Boniface, filohan’ny Mpiava am-perinasa. Tanjon’izy ireo
moa ny handrakotra sy hampianatra kabary ny kaominina rehetra eto
amin’ny distrikan’Avaradrano. Hetsika efa fanaon’izy ireo hatrany
moa ny fampianarana maimaim-poana ho an’ny kaominina isan-karazany
hoenti-mamolavola ny rehetra ho olombanona sy ho sahy handray
andraikitra, raha ny filazany hatrany. Misokatra amin’ny
fiaraha-miasa rehetra hatrany ny Mpiava ho an’izay mila izany.
Antoka iray mampandroso ny firenena ny kabary.
L’article Avaradrano – Talata-Volonondry : hampianatra kabary maimaim-poana ny Mpiava a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 15/01/2021
Kitra: Ekipa telo hiady hanao pao-droa
Efa madiva hifarana, ankehitriny, ny fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondaka sy ny ho tompon’ny amboara, taranja baolina kitra. Hatreto, ekipa telo no mbola manohy amin’ireo fihaonana roa ireo, izany hoe, hiady ny hanao pao-droa: ny Fosa Jr Boeny, ny Cnaps Sport Itasy ary ny Ajesaia Bongolava.Ho tsontsori-mamba hisarahana anefa ny an’ny Cnaps Sport sy ny an’ny Ajesaia, hiadiana ny amboara, satria hifandona ny roa tonta, eo amin’ny manasa-dalana, hotanterahina ny alahady ho avy izao any Mahajanga. Tsy maintsy hisy ny ho very izany, amin’ity.Eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka indray, mitarika aloha ny Fosa Jr, manana isa 8. Ity ekipa ity no heverin’ny rehetra fa mety hahavita io pao-droa io, raha ny toerana misy azy, ankehitriny. Eo amin’ny laharana fahatelo kosa ny Cnaps Sport, miaraka amin’ny isa 7 ary any amin’ny laharana fahafito ny Ajesaia, tsy manana afa-tsy isa 3. Ny ekipan’i Bongolava izay saro-toerana ihany. Izy ireo izay hifandona amin’ny Fosa Jr, amin’ny andro fahadimy.Mandra-piandry izany, ho fantatra ny alahady 19 mey ho avy izao ireo ekipa roa hiatrika ny famaranana hiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe de Madagascar”. Raha tsiahivina, hifanandrina etsy Mahamasina ny Uscafoot sy ny Fosa Jr Boeny ary hikatroka any amin’ny kianja Rabemananjara ny Ajesaia sy ny Cnaps Sport Itasy. Tompondaka L’article Kitra: Ekipa telo hiady hanao pao-droa a été récupéré chez Newsmada.
Malaza ho mpangalatra fantsona : lavon’ny balan’ny zandary ilay jiolahy
Tra-tehaky ny zandary avy ao Morondava i Tamboly, lehilahy iray malaza ho mpangalatra ireo fantsona ao amin’ny orinasa Sucoma na Sucrerie de complants de Madagascar. « Roa lahy izy ireo ny niditra tao amin’ilay orinasa io, ny 18 jolay teo tokony ho tamin’ny 6 ora hariva. Nanapaka fantsona lehibe miisa roa ireo jiolahy ka tratran’ny zandary », hoy ny fanazavan’ny zandary misahana ny famotorana. Taorian’ izay, nitsoaka ireo olon-dratsy ka nanaovana tifi-danitra. Tsy nanaiky anefa ireo jiolahy ka voaterty nitifitra azy ireo ny zandary. Vokany, voatifitra teo amin’ny sandriny havia ny iray amin’izy ireo, antsoina hoe Tamboly, 30 taona eo ho eo, saingy tafaporitsaka kosa ny lehilahy iray namany. Tao­rian’izay, maty noho ny ratra nahazo azy i Tamboly, jiolahy raindahiny amin’ny halatra fantsona ao amin’ny Sucoma. « Monina ao amin’ny fokontanin’i Beko­nazy, kaominina ambanivohitr’i Bemanonga, i Tambo­ly ka tsy manana kara-panondro. Mbola hita tao an-tokotaniny ireo fantsona sasany nangalariny », hoy hatrany ny zandary. Nohamafisiny fa efa na­moahana didy fampisamborana ralehilahy, talohan’ny nahalavo azy. Nifindra monina tao amin’ny fokontany Sara, kaominina ambanivohitr’Anala­hiva, anefa izy, taorian’izay. Mbola karohina kosa ilay namany.Henintsoa HaniL’article Malaza ho mpangalatra fantsona : lavon’ny balan’ny zandary ilay jiolahy a été récupéré chez Newsmada.
Depiote Edizard: « Tokony hojerena ny olan’ny rano »
Tsy ankiandriandry fa nitondra ny hetahetany sy ny olana avy hatrany. “Misedra olana eo amin’ny rano fisotro izahay. Efa an-taony maro izany ny niainan’ny mponina. Tsy eto an-tampon-tanàna ihany fa iharan’izany avokoa ny kaominina rehetra manerana ny distrika”, hoy ny depiote voafidy tao Vohemar, i Edizard, omaly teny amin’ny lapan’i Tsimbazaza. Nanteriny anefa fa manana riandrano azo trandrahina ho amin’izany ny any an-toerana. Olana anefa ny fotodrafitrasa hitarihana izany. Manoloana ireo, velon’ahiahy ny mponina any amin’ity distrika ity. “Atahorana ny valanaretina, toy ny takilidrano. Manao antso avo amin’ny fanjakana, indrindra fa ny minisitera, izahay hijery vahaolana momba izany”, hoy ihany izy. Na misy paompy aza ny kaominina sasany, olana koa anefa ny tsy fahampian’izany. Mampiasa vovon-drano sy renirano ny ankamaroan’ny mponina.Synèse R. L’article Depiote Edizard: « Tokony hojerena ny olan’ny rano » a été récupéré chez Newsmada.
Volley-ball: resy teo amin’ny famaranana avokoa ny lahy sy ny vavy
Tsy namokatra, ny ekipam-pirenena malagasy, teo amin’ny taranja volley-ball. Samy resy teo amin’ny famaranana avoko mantsy, ny lehilahy sy ny vehivavy, tamin’ity. Fihaonana, notanterahina, ny asabotsy lasa teo, tao amin’ny kianja mitafon’i Pandit Sahadeo, ao Vacoas. Teo amin’ny vehivavy, resin’i Seychelles, tamin’ny seta 3 no ho 2 ny Malagasy. Efa nitarika tamin’ny seta 2 no ho 0, anefa ry Melissa, sy ny namany, tamin’ity.Nihevitra ny rehetra fa ho lasan’ny Malagasy ny fandresena. Nanohitra hatramin’ny farany anefa ny Seiseloazy, ka nosahalainy, ho 2 sy 2 ny seta. Voatery niditra teo amin’ny “tie-break”, ny roa tonta. Mbola niseho indray anefa ny traikefan’i Seychelles, ka lasany mihitsy ny fandresena farany.Nomontsanin’i Maorisy, tamin’ny seta, 3 no ho 0 kosa ny Malagasy, teo amin’ny sokajy lehilahy. (25/16 ; 25/22 ; 25/18), niafaran’ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Tsy nampino ny rehetra, ny fizotran’ny lalao satria tsy afaka nanohitra mihitsy ry Manou sy ry Andry, niampy an-dry Mamizara sy i Fenozara. Teo amin’ny seta faharoa, no saika azon’ny Malagasy saingy, betsaka loatra ny fikoropahana, ka nahaverivery ny baolina. Nahazo ny medaly alimo, teo amin’ny vehivavy, i Maorisy raha Seychelles, teo amin’ny lehilahy. Tompondaka L’article Volley-ball: resy teo amin’ny famaranana avokoa ny lahy sy ny vavy a été récupéré chez Newsmada.
Toy ny ahoana ny fivezivezena sy fifamoivoizana eto Antananarivo, araka ny fijerin’ny mpanakanto ? Mamaly izany ny ranty « Antananarivo Ligne 11 », misokatra ho an’ny rehetra etsy amin’ny lapan’ny Tanàna…Mandeha « Ligne 11 ». Fiteny teto Iarivo nivoaka tany amin’ny faramparan’ny taona 80, ilana ny fandehanana an-tongotra. Nalaina tamin’izay ny anaran’ny tetikasa “Antananarivo Ligne 11”, izay maka endrika fampirantiana karazan-kanto, hitondran’ireo mpanakanto ny mpitsidika mitety ny renivohitr’i Madagasikara. Fampirantiana izay nomanina sy tohanan’ny Fondation H, miaraka amin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo izy ity. Mandalo etsy amin’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny fampirantiana, manomboka rahampitso alarobia 10 marsa hatramin’ny 29 marsa. Hanasan’ireo mpanakanto ireo mpitsidika, hiara-hitety an-tongotra sy anaty kanto an’Antananarivo izany. Aina Zo Raberanto, Bloumorof, Carine HCR, Didier Montagné, Gad Bensalem, Hazokely, Lowett, Sexy Expédition Yéyé, Tsiry Kely Panda, ary Yves Robinson no nanambatra ny talentany, namoaka ny “Antananarivo Ligne 11”. Hahitana mpaka sary, mpanao sary hosodoko sy sary sokitra, poeta sy mpanoratra, sns, izy ireo. Manampy izany ny haify, satria misy maneho ny tsenakely fijanonana, fakana tohan’aina, fisotrosotroana, izay manamarika indrindra ny tanàna maro eto an-drenivohitra izany.Fijery hafa an’Iarivo Ireo efa nitsidika ny ranty dia afaka manamafy fa manana fijery hafa kokoa momba an’Antananarivo rehefa avy ao. Hain’ireo mpikanto ny namoaka ilay fijery manaitra ny amparahatoka, mampivoitra ilay mampiavaka ny tanàna, eny na dia ny korontandrontana vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny tsena, ny alina mangina, sns. Hain’i Gad Bensalem tsara ny mandoko azy anatin’ny lahatsoratra mirima, maneho izay kanto fonosin’ny andavanandro izay. Toa fiainana hafa koa anefa ny alin’Antananarivo, milamindamin-dratsy, araka ny asehon’ny sarin’i Aina Zo Raberanto. Miavaka indrindra koa anefa ny fampivadiana ny iainana, hita maso, ren’ny sofina, tsapan’ny tanana fa indrindra manintona ny orona ary voarian’ny lela amin’ny tontolo foronin’ny mpanakanto, toy ny nataon’i Myriam Mech amin’ny alalan’ny Sexy Expédition Yéyé. Fijery hafa satria na eo aza ireo singa mampisy laza ratsy an’Antananarivo, mivoaka koa ny hakanton’ny tanàna rehefa lokoin’ny mpahay kanto: ambohipihaonana sy toerana manan-tantara ihany koa. Tsy natao fahatany ny firindran’ny ranty, fa maneho ny hita rehefa mandeha an-tongotra mihitsy: fitateram-bahoaka, lalana, tsena… Misokatra amin’ny kanto Ivon’ny tanàna, maneho ny endri-pitantanana ihany koa ny fisokafan’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo ho an’ny zavakanto. Efa nisy ny fampirantiana ireo hosodoko fananan’i Max et les ferailleurs manokana izay norasina tao, tsy ela akory izay. Mitohy amin’ity “Antananarivo Ligne 11” ity izany, izay mahakasika ny tanàna rahateo. “Misokatra amin’ny zavakanto koa, ary manome lanja izany ny fiadidiana ny tanàna. Ho maromaro ny hetsika ara-javakanto horaisina ato raha ny vinavina, hoy ny nambaran-dRavelomantsoa Elia, tale misahana ny zavakanto, ny kolontsaina ary ny fiarahamonina eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Manohana ny sehakanto marolafy ny Fondation H, natsanganan’ny filoha tale jeneralin’ny vondron’orinasa Axian. Angady nananana ny “Antananarivo Ligne 11” izy ireo, ary tao amin’ny toeram-pampirantian’ny Fondation H indrindra no nanomboka ity “dia an-tongotra” ity. Nialoha izao, efa nanome sehatra ireo mpanakanto teratany sy vahiny, nanohana ireo fandraisana anjara amina hetsika iraisam-pirenena toa ilay “pavillon de Madagacscar” nentin’i Joël Andrianomearisoa, nandritra ny “Biennale de Venise”, ny taona 2019 izy ireo. Nanohana hatrany ny “Prix Paritana” hatramin’ny nanombohan’ny taona 2016 ihany koa.L’article « Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto a été récupéré chez Newsmada.
Portraitiste Ranjalà: mikasa hanao fampirantiana manokana
Na eo aza ny fahasarotan’ny fitaovana enti-manao ny asa, miezaka manandratra ny zavakanto malagasy Ranjalà. Manana tanjona manokana izy amin’ny fampahalalana ny sanganasany.Amin’ny ankapobeny, olana sedrain’ny mpanao sary ny fahalafosan’ny fitaovana hoenti-manatontosa ny sary, saingy tsy tsapan’ny olona loatra ny lanjan’ny asa tanana malagasy, indrindra ny sary atao tanana… Mila ampianarina mitia sy manome lanja ny vita malagasy ny eto amin’ny firenena”, hoy Rakotondrazanany Randjalalaina Menja Voahangy Jeannie, mpanao sary vita tanana, ao anaty fikambanana Varatava. Efa hatramin’ny mbola kely no nanao sary fa ny taona 2017 vao niditra lalindalina kokoa, anisan’ny mampiavaka azy ny varatava atao amin’ny pensilihazo. Maro ny sehatra nanehoany ny talentany, na teto an-toerana na tany ampitan-dranomasina, izay niaraha-niasa tamina fikambanana misy azy, raha tsy hilaza ny tao amin’ny Galerie 59 rue de Rivoli à Paris, ny tao amin’ny IKM Antsahavola, ny tao amin’ny La City Ivandry, ny Colisée… Betsaka ny tanora tia sy mikaroka ary mianatra sary ary mahavelombolo ihany ny hoavin’ny varatava eto Madagasikara. Na izany aza, mila fikolokoloana sy fanajana ny talenta, araka ny nambarany hatrany. Manana ny adiresy “facebook” “portraitiste Ranjalà” ny tenany ho an’izay liana amin’ny sanganasany.NarilalaL’article Portraitiste Ranjalà: mikasa hanao fampirantiana manokana a été récupéré chez Newsmada.
Nonce apostolique, ny Mgr Paolo Gualtier: « Tokony haseho ny vaovao momba ny olan’ny fiarahamonina… »
Hafatra ho an’ny haino amam-jery rehetra. Tsy nitsitsy fitenenana ny amin’ny hamoahana ny vaovao marina sy ny fitaizana ny fiarahamonina ny solontenan’ny Fiketrahana masina eto amintsika.« Tokony haseho sy hampahafantarina amin’ny vaovao ny olana eny anivon’ny sehatra rehetra, indrindra fa ny fiarahamonina… Ilaina koa anefa ny vaovao manome hafaliana sy fanantenana », hoy ny teny fampianarana nataon’ny solontenan’ny papa Fransoa, ny Mgr Paolo Rocoo Gualtieri, omaly tetsy amin’ny Ekar Mb Terezy Jesoa Zazakely Ivato. Nomarihina tamin’izany ny fetin’ny olomasina Joany Bosco, mpiaro ny fikambanana salezianina sady fanamarihana ny faha-25 taon’ny radio Don Bosco. Tsy ho an’ity haino aman-jery ity ihany izany hafatra izany. Nanteriny fa mpanofana sy mpampianatra ny tanora hiatrika ny hoaviny ny salezianina. Miasa manerana ny faritra maro manerana ny Nosy ity fikambanana ity ary misandrahaka tahaka izany koa ny onjampeo RDB. « Eo am-panomanana ny faha-25 taona nijoroana ny radio izao. Nataonareo am-pahamendrehana izany, indrindra ny fampielezena ny finoana sy ny nampitana ireo mahaliana tao anatin’ny finoana ka nambabo ho amin’ny fanirahan’i Jesoa Kristy tamin’ny fomba miavaka eto amin’ity radio ity », hoy ihany izy.Mivoy ny soatoavina malagasyNotsiahivin’ny solontenan’ny papa Fransoa fa nampita sy nanome fanantenana ny RDB tamin’ny fotoan’ny fihibohana sy ny Covid-19 ireny. « Namelona ny aim-panahy ary nanome fanantenana sy hafaliana ho an’ny hafa izany », hoy ihany izy. Nohamafisiny fa anisan’ny voizina eo anivon’ny fitaovam-pifandraisana eo anivon’ny fiangonana katolika ny soatoavina maha Malagasy.Nambara tamin’ny fomba ofisialy tamin’izao Sorona masina izao ny fanombohana amin’nyfomba ofisialy ny tsingerintaona faha-25 ny eo anivon’ny RDB. Synèse R. L’article Nonce apostolique, ny Mgr Paolo Gualtier: « Tokony haseho ny vaovao momba ny olan’ny fiarahamonina… » a été récupéré chez Newsmada.
News - Santé - Midi Madagasikara
Maevatanàna : Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro
Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro eto amin’ny renivohi-paritra Betsiboka. Ankizy miisa valo eo indray mantsy no tratran’ny aretina kitrotro raha ny tarehimarika navoakan’ny tompon’andraikitry ny fanaovam-baksiny ato amin’ny disitrikan’i Maevatanàna. Ankoatra ireo ankizy madinika latsaky ny dimy taona dia mahita faisana ihany koa ny olon-dehibe, eny fa na dia ireo efa vita vakisiny tamin’ny fahakeliny aza. Raha ny fanazavan’ny mpitsabo iray dia miseho amin’ny alalan’ny fanaviana io aretina io. Mitsororika ranon-delo ilay olona, maharary be ny lohany, manakotsako ny vanin-taolany ary mety hikohaka izy. Mety hitsororika ihany koa ny ranomasony, na menabe ilay maso, izay fantatra fa mety hahajamba na hafaty raha tonga eny amin’ny atidoha. Mety hiteraka tsiranoka any amin’ny atidoha ilay aretina, na mety hampivalana ihany koa raha tsy voatsabo. Manoloana izay dia nisy ny fidinana ifoton’ny nataon’ny mpiasan’ny fahasalamana tamin’ireo sekoly rehetra teto Maevatanàna tampon-tanàna na miankina amin’ny fanjakana na ihany koa tsy miankina. Na izany aza, dia tsy ilay kitrotro loatra no mahafaty fa ireo karazan’aretina manafika ilay marary raha vatany vao midina ny hery fiarovana ao anatiny. Ny fanaovana vaksiny no vahaolana tsara indrindra. Maimaimpoana ny fanaovana izany eny anivon’ireo hopitalim-panjakana, toy ny CSB. Afaka mandray an-tanana ireo marary ihany koa ny fitandroana hatrany ny fahadiovana ary ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana feno hery sy be otrikanina. Nolazain’ity dokotera Felucien ity, hatrany fa tsy tokony hianatra ao anatin’ny 15 andro ny mpianatra voan’ny kitrotro fa manaraka fitsaboina, fa ireo mpiasam-panjakana ihany koa tsy tokony hiasa ao anatin’ny 15 andro rehefa tratran’ny kitrotro. Araka ny fanazavan’ity dokotera ity hatrany dia manomboka amin’ny 07 ora maraina ka hatramin’ny 06 ora sy sasany hariva ny hopitalim-panjakana no tsy mitsahatra ny mandray marary isan’andro. RatantelyL’article Maevatanàna : Mahazo vahana sy miparitaka ny aretina kitrotro a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – «Chan 2020»: nanome 300 000 Ar ho an’ny Barea ny ligin’i Bongolava
Niatrika lalao fitsapana, nikatrohana tamin’ny ekipa voafantin’i Bongolava, tany amin’ny kianja Tsiroanomandidy, ny alahady lasa teo, ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, natokana ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny “Chan 2020”. Tamin’izany no nanoloran’ny ligin’i Tsiroanomandidy lelavola 300 000 Ar ho an’ny ekipam-pirenena malagasy, hanampiana azy ireo hiatrehana ity fifaninanana ity.Raha hiverenana kosa ny lalaon’ny roa tonta, resin’ny Barea, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, i Bongolava.Mila fanamboarana ny famonoam-baolina ho an’ny Barea, izay mbola lesoka ho an’ireo lohalaharana. Ankoatra izay, tokony hamafisina ihany koa ny fiarovantena, izay somary goragora. Tsiahivina fa hiatrika an’i Mozambika ny Barea, ny asabotsy 27 jolay ho avy izao, etsy Mahamasina, eo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fifanintsanana ho an’ity “Chan 2020” ity. Tompondaka L’article Kitra – «Chan 2020»: nanome 300 000 Ar ho an’ny Barea ny ligin’i Bongolava a été récupéré chez Newsmada.
A vendre ~~ PILLS, AND LIQUID CREAM FOR PENIS ENLARGEMENT + 27670236199}} 100% WORKING, Sandton, Johannesburg
~~ PILLS, AND LIQUID CREAM FOR PENIS ENLARGEMENT + 27670236199}} 100% WORKING, Sandton, Johannesburg Lenasia Randburg Midrand Boksburg Benoni Germiston, rakpan Daveyton, Duduza, Edenvale, germiston Impumelelo Isando Katlehong Kempton Park KwaThema Nigel Reiger Park Springs Tembisa Thokoza Irene Mamelodi Pretoria Soshanguve Boipatong Bophelong Evaton Sebokeng Sharpeville Vanderbijlpark Vereeniging Meyerton Heidelberg Ratanda Bronkhorstspruit Ekangala Kungwini Bronberg Cullinan Hammanskraal Refilwe ZithobeniberbukuberburkummurburkUmbersmagultimagin Kummiwiswi PENIS ENLARGEMENT, CONTROL EARLY EJACULATION, ELEVATE YOU SEX DRIVE, INTESIFY YOUR ORGANISM, MAKE MORE ROUNDS, PENIS SIZE UP CREAM, STRONG ERECTION, PENIS OIL AND PILLS It is the leading male enhancement program providing you the safest, quickest and easiest program to increase your penis size by 3 to 15 full inches - GUARANTEED !!! You can do alml that in only 5 minutes per day for 3 to 5 days Call or watsupp Dr john gava +27670236199 Email: johngava80@gmail.com Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre ~~ PILLS, AND LIQUID CREAM FOR PENIS ENLARGEMENT + 27670236199}} 100% WORKING, Sandton, Johannesburg".
A vendre RESTAURANT REPUTE
A vendre, Référence VMFC 120/20 MB1, à Mahajanga centre-ville, sur le boulevard de la Corniche avec vue directe sur la mer, un restaurant réputé tenu par les mêmes propriétaires depuis près de vingt ans. Emplacement exceptionnel pour cette affaire à fort potentiel qui est vendue murs et fonds inclus.Cet ensemble constitué d’une solide villa coloniale d’environ 300 m² est bâti sur un terrain titré borné clos de murs de 1100 m² dans un environnement calme et sécurisé.La partie restauration d’une superficie d’environ 250 m², est composée d’une terrasse extérieure couverte qui domine la mer, d’une autre terrasse couverte attenante à la maison également avec vue sur mer, d’une salle de restaurant intérieure, d’un bar, de toilettes pour la clientèle et d’un espace constitué de plusieurs salles dont une cuisine, une boulangerie-pâtisserie, une épicerie et un passe-plat. A l’extérieur, derrière la villa une cour avec bassins et toilettes personnels et un petit bâtiment en cours de construction.Toujours dans le bâtiment principal, une partie habitation constituée de deux chambres et d’une salle d’eau.Pour tout renseignement supplémentaire et pour une visite, merci de prendre contact avec l’agence AIM, par téléphone au 032 97 156 68 et 032 68 576 41 ou par mail à contact@mahajanga-immobilier.com Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre RESTAURANT REPUTE".
A louer VILLA AVEC JARDIN PAYSAGER
A LOUERRéf LMV 198/21 MB3,En location annuelle à Mahajanga, dans le quartier de Mangarivotra et à l’intérieur d’un lotissement résidentiel, à 5mn du centre-ville, une belle villa de plain-pied d’environ 70m2 habitables située sur un grand terrain clôturé aménagé en jardin paysager. Cette villa est constituée d’un salon, d’une cuisine aménagée et placardée avec son coin repas, de deux chambres climatisées, d’une salle de bain avec cabine de douche, d’un WC séparé. L’ensemble a été rénové avec goût et ouvre sur une grande terrasse couverte. A l’extérieur, un parking couvert pour deux véhicules et une petite maison réservée au propriétaire.Son loyer est fixé à l’équivalent en monnaie nationale de 500 euros, soit 2.300.000 Ariary, sur la base d’un bail annuel renouvelable par tacite reconduction avec une augmentation annuelle de 5%. A la signature du bail, versement du premier loyer, d’une caution correspondant à un mois du même montant et des honoraires d’agence fixés à 75% du loyer.Pour tout renseignement et pour une visite, merci de prendre contact avec l’agence AIM, par téléphone au 032 97 156 68 et 032 68 576 41 ou par mail à contact@mahajanga-immobilier.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A louer VILLA AVEC JARDIN PAYSAGER".
A vendre Terrain à vendre Talatavolonondry Antananarivo
VASTE TERRAIN A VENDRE Idéal pour grand projet, terrain plat de plus de 8HA Lieu : Talatavolonondry à 1km d'Avaratsena RN3 Titré/Borné Accès poids lourd A proximité immédiate du réseau Jirama (eau et électricité) Prix : 15.000Ar/m2Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Terrain à vendre Talatavolonondry Antananarivo".
A vendre Maison a vendre Ampefiloha
Ampefiloha cité : Maison a 2 étages au 1er étages comprenant: 5 Chambre avec cuisine, Confort,Eau et Électricité, titré et borné parking gardéPrix : 950 000 000 fmg legèrement a débatreContact : 0331112637-0331198039-0346437019E-mail : immo.jhn@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A vendre Maison a vendre Ampefiloha".
Volley-CEV 2021: misolo tena an’i Dago ny DTN Honoré
Mampitombo hatrany ny traikefa ara-teknika, ny avy eo anivon’ny federasiona malagasy ny Volley ball. Miatrika ny CEV (Convention des Entraineurs de Volley ball) any Slovenie, amin’izao fotoana izao, ny tale teknika nasionaly, Razafinjatovo Jean Honoré, hahafahana mampitombo izay traikefa izay. Firenena miisa 170 maneran-tany, samy manana solontena avokoa ny mandray anjara amin’ity karazana fifampizarana ity ka tsy diso anjara amin’izany i Madagasikara. Fiarahana mianatra, mijery akaiky ny lafiny teknika sy izay mila hatsaraina, ireo no hiarahan’ireo mpanazatra maneran-tany mifampizara mandritra ny fotoana hiofanan’izy ireo any an-toerana. Miara-misalahy amin’ny fikarakarakana ny fampiofanana ny eo anivon’ny CAVB (Confédération Africaine de Volley Ball). Hitondra fiovana sy fivoarana goavana ho an’ny taranja volley ball eto Madagasikara ny fiatrehan’ny DTN ity CEV 2021, nanomboka ny herinandro lasa teo ity.Mi.RazL’article Volley-CEV 2021: misolo tena an’i Dago ny DTN Honoré a été récupéré chez Newsmada.
Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail
Nanomboka ny taona 2002, noraisin’ny orinasa Madarail ny fampiasana ny lalamby malagasy tapany avaratra : Antananarivo –Toamasina ; Moramanga-Ambatondrazaka ; Antananarivo-Antsirabe. Mijanona ho fananam-panjakana ny fotodrafitrasa, fa ny fitrandrahana azy no nifanarahana amin’ny Madarail rehefa tsy afaka intsony ny RNCFM (Réseau national de chemin de fer malagasy).« Karazana mpindrana ihany ny Madarail fa tsy tompon’ny lalamby. Mbola misy fandraisana anjaran’ny fanjakana ny amin’ny fitrandrahana fotodrafitrasa sy fitaovana navelan’ny RNCFM izay », hoy Rakotondramanana Lalaina, tale ara-barotra ao amin’ny Madarail. Ao anatin’izany asa fitaterana izany, ny fikojakojana ireo fiarandalamby, ny lalamby sy ireo fitaovana samihafa eny amin’ny toby fitahirizana entana sy gara.Ny asa lehibe indrindra ataon’ny Madarail izao dia ny fitaterana solika sy entana. 70 eo ho eo ny wagons mitondra solika ( wagons citernes ) avy any Toamasina ; mitatitra ny voakatry ny fambolena avy amin’ireo toerana tsy tongan’ny fiara na tsia ; mitondra fitaovana samihafa fanaovan-trano, toy ny simenitra, avy any ivelany sy ireo entam-barotra samihafa. Wagons fitatetara kaontenera na wagons misarona ny hitondrana ireo. Ankoatra izay ny fitaterana kraomita manomboka eo Morarano Chrome, faritra Ambatondrazaka mitondra izany hatrany Toamasina. Saingy nijanona izany hatramin’ny nijanonan’ny Kraomita Malagasy, izay antenaina fa hiverina tsy ho ela.Mitohy ihany anefa ny fitateran’olona any amin’ireo toerana lavitry ny lalam-pirenena, miantoka ny fivezivezen’ny mponina amin’ireo tanàna anelanelan’i Moramanga sy Ambila Lemaitso. « Tafiditra anatin’ny bokin’andraikitra ny fitateran’olona tsy tapaka amin’ireny tanàna ireny », hoy ny tale ara-barotra. Tsy mitondra olona loatra ny Madarail, Antananarivo-Moramanga na Moramanga –Ambatondrazaka noho ireo toerana ireo manamorona ny RN2 sy RN44. Ampiharin’ity orinasa ity ny fepetra rehetra hisorohana ny loza amin’ireo asa fitaterana ireo : Système de Management de la Sécurité (SMS).Vakoka harem-pirenenaVakoka eto amin’ny firenena ny fitaterana an-dalamby. Manamarika izany ireo gara tamin’ny fiandohan’ny taonjato faha-20 sy ireo lohamasinina tranainy mbola miasa hatramin’izao. “Tsy namidin’ny fanjakana ireny gara ampiasain’ny mpandraharaha hafa ireny fa nampanofaina araka ny fotoana nifanarahana, dia anjaran’ny mpanofa no mikojakoja amin’ny maha vakoka harem-pirenena azy”, hoy ihany Rakotondramanana Lalaina. Nomarihiny ihany koa fa tompon’andraikitra eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fitaterana ny Madarail amin’ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa mahakasika ny tetikasan’ny Fiadidiana ny Repoblika momba ny fitaterana olona amin’ny fiarandalamby eto Antananarivo sy ny manodidina. Efa manomboka izao ny asa iarahana amin’ny Colas sy Sogea, avy eny Ambohimanambola hatreo Soarano.L’article Zotra an-dalamby: fitaterana solika sy entana no asa goavana sahanin’ny Madarail a été récupéré chez Newsmada.
Mamo rangahy, niady izy mivady… Napoakany tamin’ny dinamita ny tranony
Nosamborina ary natao andry maso ao amin’ny biraon’ny kaomisarian’ny polisy, ao Fianarantsoa ny lehilahy iray, omaly. Noho ny hamamoana taorian’ny fifamalian’izy mivady, napoakany tamin’ny dinamita ny trano fonenan’izy ireo.Tranga hafakely. Raim-pianakaviana iray nahavita nanapoaka dinamita ny trano fonenany, omaly tokony no tamin’ny 01 ora tolakandro tao amin’ny fokontany Ankofafa, kaominina ambonivohitr’i Fianarantsoa. Vokany, nirehitra tanteraka ny trano fonenan’ireo mpivady, nijoalajola ny afo. “Nisy fipoahana mafibe tao amin’io trano io ary iny no nitarika ny fahamaizana. Tsy vitan’izay fa mbola niendaka ihany koa ny tafon-trano iray mifanila vodirindrina amin’io trano io vokatr’izay”, hoy ny fanazavan’ny polisy ao an-toerana. Teo vao nitangorona sy nifanome-tanana namono ny afo ny mpiara-monina. Ny sasany kosa niantso mpamonjy voina. Araka izany, voafehy ny afo ny harivan’ny tranga, tokony ho tamin’ny 04 ora sy sasany teo ary tsy atahorana hiitatra intsony izany.Efa fanaony…Mamo ilay rangaha nahavanon-doza tamin’ny fotoana nanapoahany ny dinamita. Voalaza koa fa avy nifamaly tamin’ny vadiny izy tamin’io fotoana io. Tranga tsy vao voalohany ihany koa izao fanapoahan-java-mahery vaika izao. Nisy fotoana efa napoaka’io lehilahy io tamin’ny dinamita ihany koa ireo biby fiompin’izy ireo, dia ny akoho fakana nofo nahatratra 100 isa. Fantatra fa miasa amina kariera ramatoa vadin’io raim-pianakaviana io, antony ananan’izy ireo fanapoaham-bato ao an-trano. Taorian’ny loza, atao andry maso ao amin’ny kaomisaria ao an-toerana ilay rangaha.Henintsoa HaniL’article Mamo rangahy, niady izy mivady… Napoakany tamin’ny dinamita ny tranony a été récupéré chez Newsmada.
Tetikasa PIAA iarahan’ny CUA sy ny MaTSF: ho voaro amin’ny tondra-drano ny eny ambany tanàna
Nidina ifotony nijery ny firosoan’ny asa amin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa fanadiovana an’Antananarivo na ny PIAA ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina sy ny minisitra Andrianainarivelo Hajo, omaly. Anisan’izany ny fijerena ny tetikasa lalankely sy ny lakandrano eny Ankorondrano sy ny eny Androndra. Niray feo ny roa tonta. « Aoka hohajaina hatrany ny fepetra iarovana ny fotodrafitrasa mba hananantsika tanàna madio sy mandroso. Aoka isika hanara-dalàna amin’ny fanorenana ary tsy hanary fako eny rehetra eny. Hisorohana ny fiakaran’ny rano ny anton’izany… » hoy izy ireo.Hiditra amin’ny dingana manaraka, PIAA andiany faharoa izao ny tetikasa ary efa mandinika ny hanohizana izany ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny fananantany (MaTSF) sy ny CUA. Tafididtra amin’ny fiarovana an’Antananarivo manoloana ny tondra-drano rahateo izany. « Efa ho avy ny fahavaratra ka hafainganina ny asa ahafahana misitraka ny tetikasa hamaha ny olana mety hiseho amin’ny fotoanan’ny orana », hoy ny minisitra.Tetikasa eny ifotony ahitana tombontsoaNankasitraka ireo mpiara-miombona antoka rehetra kosa ny ben’ny Tanàna, ary nanamafy fa tetikasa mipaka eny ifotony ahitan’ny mponina tombontsoa izao an-dalam-pahavitana izao. « Teo ny fanadiovana ny lakandrano rehetra. Fa eo koa ny fanamboarana ny lalankely sy ireo fotodrafitrasa hisorohana ny fiakaran’ny rano. Hotohizana hatrany izany ary hisitraka ny tetikasa avokoa ny fokontany rehetra. Mandroso ny asa ary hita fa miova sy mihatsara ny tanàna », hoy izy.Synèse R. L’article Tetikasa PIAA iarahan’ny CUA sy ny MaTSF: ho voaro amin’ny tondra-drano ny eny ambany tanàna a été récupéré chez Newsmada.
Stopper l’insécurité sur les routes nationales
C’est maintenant la peur au ventre que les automobilistes empruntent les axes vers le sud, vers le nord ou vers l’ouest de la Grande île. Les attaques qui ont pris pour cible les taxis-brousse nous ramènent à un passé que l’on voudrait oublier. Il s’agit de bandits parfaitement organisés qui tendent de véritables embuscades, ne laissant aucune échappatoire aux malheureuses victimes. Les caravanes qui s’étaient formées pour se protéger ont été prises d’assaut et les passagers ont été molestés et dépouillés. Les autorités doivent relever ce défi de l’insécurité qui est en train de mettre à mal l’ordre public. Stopper l’insécurité sur les routes nationales Le pouvoir a fait de la lutte contre l’insécurité une de ses priorités. Des efforts ont été déployés par les ministères concernés. Cependant, malgré les stratégies élaborées, il y a toujours des attaques à mains armées, des cambriolages et des kidnappings dans de nombreuses localités. Mais jusqu’à présent, ceux qui empruntaient les routes nationales semblaient épargnés. Ce sont maintenant des bandits de grand chemin qui attaquent les voitures et les taxis-brousse qui roulent de jour comme de nuit sur ces routes. Les brigands sont parfaitement organisés et opèrent en nombre. Ils sont armés et déterminés. Ceux qui sont pris dans des guets-apens ne peuvent que céder devant leur brutalité. Les voyageurs sont molestés et dépouillés de tout ce qu’ils possèdent. C‘est donc un défi qui est lancé aux forces de l’ordre chargées de restaurer la paix et la sécurité sur les tronçons où il est hasardeux de circuler. Les gendarmes affirment qu’ils vont escorter les caravanes de voitures qui vont être formées. C’est une opération militaire comme celle mise en place pour lutter contre les dahalo que les responsables vont lancer. L’urgence commande l’utilisation de moyens importants car les autorités ne peuvent pas laisser cette insécurité s’installer. Patrice RABEL’article Stopper l’insécurité sur les routes nationales a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Ankasina-Andohatapenaka: nahazo fampitandremana ireo manorina ambony lakandrano
Fanorenana tsy ara-dalàna izay fotodrafitrasana mitsangana eny ambony lakandrano. Anisan’izany ny tazana tetsy Ankasina sy Andohatapenaka iny. Manome fe-potoana ny CUA hanalana ireny fotodraitrasa ireny.Efa hiditra amin’ny vanim-potoana fahavaratra isika, afaka volana vitsy. Dieny izao, miditra amin’ny fanadiovana lakandrano ny kaominina Antananarivo Renivohitra hisorohana ny fiakaran’ny rano.Nidina teny amin’ny fokontany Ankasina, hatreo AndohotapenakaI ireo tomponadraikitry nyfahadiovana ao amin’ny CUA, omaly, nijery ifotony ny zava-misy eny an-toerana.Tsikaritra tamin’izany fa tsentsina tanteraka ny lakandrano noho ny fako sy ny loto ataon’ny mponina. Poti-kanina, solefanina, tavoahangy…. Misy ihany koa ny fanorenana tsy ara-dalàna hita tambonin’ny lakandrano sy ny namanodidina izany ka mety hanelingelina ny fanadiovana izay hatao ato ho ato.Nampitandrina ireo tompon’ny fotodrafitrasa tsy ara-dalàna teny Ankasina sy Andohatapenaka iny ireo tomponandraikitra mba hanala izany dieny izao mba tsy hiteraka sakantsakana amin’ny fanadiovana izay tsy maintsy hatao. Misy ny fe-potoana nomena tamin’izany hahafahan’izy ireo miala. Fananana iombonana ny lakandrano ka tsy tokony hisy fanorenana velively eny amboniny. Tsy fanariana fako ko izy ireny fa natao hikorianan’ny rano maloto sy ny ranon’orana ihany.Tatiana AL’article Ankasina-Andohatapenaka: nahazo fampitandremana ireo manorina ambony lakandrano a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana an’Antananarivo: hanorina tanàna eny Tanjombato ny Rundong
Hiova tanteraka. Mitondra vahaolana ny orinasa sinoa iray, Rundong international development, hamahana ny teritery rehetra eto Antananarivo. Manana tetikasa goavana ity orinasa ity eo Tanjombato.Haorina amin’izany ny trano lehibe miisa valo misy rihana 15, ka ho vita amin’ny faran’ny taona 2023 ny roa. Hametrahana tranombarotra, sekoly, faritra fialam-boly, fanaovana fanatanjahantena koa ilay tanàna.Azo fidiana araka ny refy, manomboka eo amin’ny 89 m2, 112, 136, 148, 255m2 ny lehibe miaraka amin’ny dobo filomanosana izany. “Hisy vovon-drano lehibe hampahaleotena ny faritra amin’ny rano ; iarahana amin’ny Jirama ny herinaratra. Hiverina noho ny milina matanjaka atao vonona kosa izany raha sendra tapaka”, hoy Ramiliarivelo Holy Fanjatiana, talen’ny varotra ao amin’ny Rundong.Tanjona ny hampiova endrika an’Antananarivo hisian’ny fampandrosoana maharitra, ka hoentin’ny Rundong ny sokajy voalohany amin’ny asa rehetra eo amin’ny fanorenan-trano. Hisy rindrina miaro amin’ny horohoron-tany izany, efitrano maoderina, karatra elektronika sy marika amin’ny lavotondro ny fidirana amin’ny varavarana, fiambenana ny tanàna. Hampilamin-tsaina ny tompon-trano avokoa izany.Hoentina eto ny fahaiza-manao sy ny traikefa sinoa. Efa hita izany eo amin’ny Kianja Barea, ary tohizan’ny orinasa Rundong izao. Mpahay taotrano sy teknisianina isan-tsokajiny avy any Chine ireo ho avy hanao ny asa, rehefa misokatra ny sisin-tany. Hanampy ny teknisianina malagasy ny fiaraha-miasa amin’ireo Sinoa ireo.R.MathieuL’article Fanatsarana an’Antananarivo: hanorina tanàna eny Tanjombato ny Rundong a été récupéré chez Newsmada.
Fikasana hamono ny Seg teo aloha: maty tany am-ponja Randriamialy Faliherisoa
Nodimandry tany am-ponja teny Tsiafahy , tamin’ity herinandro ity, ilay ahiana ho voasaringotra ho nikasa hamono sy hitifitra ny Seg teo aloha, ny Jly Ravalomanana Richard, Randriamialy Falihery Eric . « Tsy misy tokony hidirany izany raharaha izany fa endrikendrika fotsiny ihany », hoy ny fianakaviany sy ireo mahafantatra azy. Notsiahivin’izy ireo fa mpivarotra fiara tsotra no asany ary sendra teo amin’ilay toerana nisamborana olona ny tenany tamin’izany, ka noraofina niaraka tany koa izy. « Niakatra ny tosidrany, ka namoy ny ainy tany am-ponja izy », hoy ihany ny fianakaviana.Nitondra fanazavana momba izao raharaha izao ny eo anivon’ny fonja fa efa nandalo fitsaboana sy ny dokotera eny Tsiafahy izy io. Tokony halefa hampidirina hopitaly saingy izao namoy ny ainy izao.Synèse R.L’article Fikasana hamono ny Seg teo aloha: maty tany am-ponja Randriamialy Faliherisoa a été récupéré chez Newsmada.
Tafody an-tanindrazana… Nomena mari-boninahitra i Sammy Rastafanahy
Rehef avy niady tamin’ny aretina, nodimandry ny 18 septambra lasa teo i Sammy Rastafanahy. Tany La Réunion no nitsabo tena ary tany koa no lavo ity mpanakanto fanta-daza tamin’ny fivoizana ny gadona reggae ity. Henjankenjana ny fampodiana ny razana, ka nisy ny fiantsoana tolo-tanana nataon’ny namana sy ny fianakaviana, hampodiana ny nofo mangatsiakan’ity mpanakanto ity. Maro ireo namaly ny antso, ka feno ny hoenti-manana nahafahana nampody ny faty. Tonga omaly hariva ary avy hatrany dia nivantana teny amin’ny Tranompokonolona Analakely ny vatana mangatsiakan’i Sammy Rastafanahy. Vory lanona, nanome voninahitra farany azy ireo namany mpanakanto, nanotrona ny fianakaviana. Teny an-toerana ihany koa ny solontenam-panjakana isan-tsokajiny. Nanome ny mari-boninahi-pirenena, “Chevalier de l’Ordre National” ho an’i Sammy Rastafanahy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana. Fantatra fa hihazo an’i Mahajanga, izay toerana handevenana azy ny vatana mangatsiakan’ity mpanakanto ity, anio.Zo ny AinaL’article Tafody an-tanindrazana… Nomena mari-boninahitra i Sammy Rastafanahy a été récupéré chez Newsmada.